MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA BEAUCERON IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Beauceron iyo Sawirro
'Kani waa Classie' Ellita 'de Nanrox at 6 monthe jir. Waxay kaqeybqaadataa firfircoonida iyo dhaqashada waxaanan dhawaan bilaabi doonnaa kubbadda duulista, udgoon iyo ka-baraf. Aad ayey u deggan tahay guriga oo waxay jeceshahay inay ku ciyaarto banaanka. '
Liistada eeyaha ey isku dhafan yihiin ee Beauceron
Shaashado Casaan ah
Beauceron waa eey weyn, isboorti ah, oo shaqeeya. Jidhku waxyar buu ka dheer yahay inta uu dheer yahay. Madaxu waa dheeryahay oo waa laqeexan yahay jirka. Qalfoofku wuxuu le'eg yahay dherer ahaan cidhiidhiga, dhibcaha ama xad-dhaafka ballaadhan. Joogsiga ayaa in yar lagu dhawaaqaa. Indhaha madow ee mugdiga ahi way siman yihiin oo wax yar mooyee. Qaybta nabarrada le'eg ama dhegaha hoos u dhaca ayaa la sarreeyaa, ama gooyaa ama dabiici ahaan looga tegey. Jaangooyada AKC waxay ku baaqeysaa in lugu labalaabmo lug kasta oo dambe isla markaana loo qalmo eey aan lahayn. Dabada waa la jajaban yahay, oo hoos ayaa loo qaadaa ugu yaraan ilaa hock oo sameysma qaab 'J.' Labbiska labbiska oo jilicsan, gaaban ayaa leh timo dheer labada dabada iyo gadaasha labadaba. Koodhka dibaddu wuu adag yahay halka koodhkuna jilicsan yahay oo jilicsan yahay. Waxay ku timaaddaa madow oo leh astaamo maqaar oo kala duwan iyo jaakad harlequin ah oo aan caadi ahayn oo leh dhejisyo cawl, madow iyo madow. Koodhadhka harlequin waa inuu lahaadaa mid madow oo ka badan cawl aan lahayn caddaan. Eeyaha madow iyo tan, astaamaha maqaarku waxay ka muuqdaan laba dhibic oo indhaha ka sarreeyaa, dhinacyada muuska, iyagoo u sii dhacaya dhabannada, laakiin ma gaadhaan dhegaha hoostooda. Sidoo kale cunaha, dabada hoosteeda iyo lugaha iyo laabta. Calaamadaha tan ee xabadka waa inay u muuqdaan inay yihiin laba barood, laakiin saxanka xabadka waa la aqbali karaa.
Boqor Charles spaniel iyo isku dhafka frize bichon
Beauceron waa geesi, caqli badan, adeec badan, eey shaqeeya. Ujeedo oo diyaar u ah inay ka farxiso, waxay ku fiicantahay tababarka adeecida, oo aad u dhaqso badan si loo fahmo loona jawaabo amarrada sayidkiisa. Beauceron wuxuu awood u leeyahay shaqada booliska, maadaama ay daacad tahay, dulqaad badan tahay, aamin tahay, aan cabsi lahayn oo aad u feejigan, awood u leh inay ogaato qatarta. Waa eey u qalma, eeyga ilaaliyaha dabiiciga ah ee jecel inuu ka shaqeeyo oo jimicsi ka sameeyo meelaha banaan ee ballaaran. Mid kale oo ka mid ah hibooyinkeeda badan ayaa u shaqeynaya sida eey raacaya. Waxay isku dayi kartaa inay daadiso bini-aadamka iyo wax kasta oo kale oo aragtideeda ah oo u baahan in la baro tani ma ahan wax la aqbali karo. Waxaa jira meelo aad ku qaadan kartid eeyo halkaas oo ay ku muujin karaan awooddooda xoolo adhi ah. Tani waa hab aad u fiican oo ay ku sii daayaan tamar isla mar ahaantaana ka shaqeeyaan maskaxdooda. Jimicsi kugu filan Beauceron-kaagu wuu daganaan doonaa. Waxay ku fiicnaan doontaa eeyaha ay taqaano waxayna baran karaan inay la noolaadaan eeyaha kale iyo bisadaha. Waa in aan kaligiis looga tagin muddo dheer waqti aan jimicsi lahayn. Si fiican tababarka oo leh sayid adag waa waajib, oo ay weheliso qaddarka jimicsiga iyo hogaamiye baako adag, si loo soo saaro eey xasilloon, oo adeecsan. Bulsho si aad ufiican marka aad da 'yartahay si loola dagaallamo dabeecadaha gardarrada ah oo hubi inaad eeyga xakameyso marka eeyaha kale joogaan. Bar eyga ixtiraamka aadanaha adigoon u oggolaan bood bood oo aan u oggolaanayn inay marka hore soo gasho albaabbada. Dadku waa inay eeyga sameeyaan ciribta dhinaceeda ama gadaashooda markaad socoto . Waxay bixisay natiijooyin aad ufiican oo ah ilaaliyaha hantida, laakiin isla markaa waxaa lagu qadariyo sida eey wehel ah. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo xirmadooda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeysaa hal khadadka hoggaamiyeyaasha si cad ayaa loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Adiga iyo dadka kale oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta. Markii si habboon loo tababbaray oo la dhexgalay bulshada, kani waa eey aad u wanaagsan oo wehel weyn u ah qoyska. Waxay ubaahantahay in la ogaado cida madax ah kadibna way xigi doontaa , laakiin maskaxda ku hay, eeygan aadka u ilaaliya wuxuu raaci doonaa oo keliya qof maskax adag. Haddii ay kaa maskax adag tahay, waxay kaa filan doontaa inaad adigu raacdo. Beauceron-ka guud ahaan wuu ku wanaagsan yahay carruurta haddii uu u arko aadanaha inuu yahay shakhsiyaad ka amar qaata oo bulshada dhexdeeda laga dhex galiyay Waxay adeeci doontaa amarrada ka imanaya dhammaan xubnaha qoyska. Noocan firfircoon ee firfircoon wuxuu si dhakhso leh u koraa, isagoo gaaraa 40 rodol oo kaliya qiyaastii 3 bilood jir. Waxay ku noqon kartaa cunug yar. Eydu waa kuwo firfircoon oo gaabis ah in ay bislaadaan. Beauceron waa inuu ahaadaa mid si fiican oo dhameystiran u dhex gala bulshada. Beauceron in uu ahaa si fiican u dhexgalay barbaarinta iyo barbaarinta waxay si fiican ula socotaa xaaladaha caadiga ah ee carruurta, taasina waxay sidoo kale hubineysaa in eeyaha iyo xayawaanka kale aysan wax dhibaato ah soo bandhigi doonin.
Dhererka: 24 - 27 ½ inji (32 - 70 cm)
Miisaanka: Ilaa 110 rodol (50 kg)
Beauceron guud ahaan waa caafimaad, nooc adag. Khadadka qaar ayaa ah u nugul ubax iyo sida nooc kasta oo ka badan 40 rodol, Beaucerons waxay u nugul yihiin dysplasia sinta. Boqolkiiba sagaashan iyo shan boqolkiiba dhammaan soosaarayaasha ku nool Mareykanka waxay kaliya kaydiyaan shahaado la xaqiijiyay.
Beauceron wuxuu ku fiicnaan doonaa aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Waxay dhex dhexaad ka yihiin gudaha waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan daarad weyn.
Beauceron waa nooc shaqo oo u baahan in badan oo labadaba ah jimicsi maskaxeed iyo mid jireed . Waxay ku fiican yihiin nooc shaqo ah inay qabtaan. Haddii jidhkooda iyo maskaxdoodaba aan si waafi loo fulin way adkaan doonaan in la maareeyo iyo wax duminaya . Kuma qanacsana wareegga wareegga guriga saddex jeer maalintii. Waxay u baahan yihiin noocyo kala duwan. U qaado iyaga socod dheer oo joogto ah, inta lagu jiro taas oo ay si xor ah uga bixi karaan xadhigga oo ay ku ciyaari karaan (meel aamin ah). Haddii labadiinuba u muuqdaan inaad ku raaxeysaneysaan, iska qor koorso aad ku tababbaraneyso qabsashada ama ku tartamida fasalo xirfadeed (inkasta oo tartanka ay u badan tahay inuu ka guul yar yahay noocyada kale ee ku habboon). Bar eeygan inuu ixtiraamo aadanaha, ciribta hoggaanka, gelitaanka iyo bixitaanka albaabka iyo albaabbada dadka ka dib.
Koodhka Beauceron uma baahna fiiro weyn. Is qurxin mararka qaarkood leh feejignaan dheeri ah inta lagu jiro waqtiga eygu daadinaayo ayaa ku filan. Beaucerons waa celcelis daadiyayaal.
Beauceron waa dhif iyo naadir gudaha Mareykanka. Waa nooc faransiis ah oo faransiis ah oo diiwaanka ugu da 'weyn ay ka soo bilaabatay qoraaladii Renaissance ee 1578. Sanadkii 1863 ayaa nin la yiraahdo Pierre Megnin wuxuu kala soocay laba nooc oo ido ah, midna jaakad dheer, oo loo yaqaan' Laaluush , iyo tan kale oo leh jaakad gaaban, oo noqotay Beauceron. Sanadkii 1863 Beauceron-ka waxaa lagu soo bandhigay Expoition-ka ugu horreeya ee lagu sameeyo Canine Exposition in Paris. Sannadkii 1897-kii ayaa la aasaasay naadi eygii adhijir ee ugu horreeyay iyadoo labada Beauceron iyo Briard-ka laga aqbalay. Kahor 1889 Beauceron iyo Briard waxay caan ku ahaayeen inay ahaadaan ilaaliye adeyg ah oo geesinimo leh laakiin midka u janjeera inuu qabsado oo qaniino difaaca adhigiisa. Labada dabeecadood ee dabeecadeed ayaa lagu jilciyey taranka xulashada. Sannadkii 1889, ayaa la dejiyay magaca iyo heerka jaangooyada. Sanadkii 1911 naadi gooni gooni ah ayaa loo sameeyay Beauceron, oo si rasmi ah uga dhigay iyada Laaluush . Beauceron wuxuu u shaqeeyaa sidii adhi ilaalin ah meelaha ka furan ilaalinta idaha iyo xoolaha kale. Noocyada ayaa sidoo kale loo adeegsaday militariga. Iyagoo iska indhatiraya bambooyinka qarxa ama madaafiicda, eeyaha waxaa loo adeegsaday inay fariimaha qabtaan, ogaadaan miinooyinka, raadadka ay qaadaan, taageeraan falalka talisyada, raadinta dhaawacyada, iyo inay raashin iyo rasaas u qaadaan jiidaha hore. Beauceron, sida noocyada ido badan oo adhi ah, way fududahay in lagu tababaro hawlo ka baxsan daryeelka adhiga ama lo'da. Deganaantiisa iyo awoodiisa inuu raaco amarrada si hagar la’aan ah ayaa si fiican loogu muujiyay labadii dagaal ee ugu weynaa Yurub. Maanta eeygan culus ee shaqeeya wali waxaa loo isticmaalaa inuu yahay xoolo dhaqato, eey waardiye ah iyo booliska iyo ciidamada Faransiiska. Noocani wuxuu caan ka yahay Galbeedka Yurub iyo Waqooyiga Ameerika oo ah ilaaliye qoys iyo wehel, laakiin wali waa dhif iyo naadir. Beauceron waxaa laga aqbalay AKC sanadkii 2006 ayadoo loo marayo kooxda xoola dhaqatada. Qaar ka mid ah hibooyinka Beaucerons waa dabagalka, dhaqashada, ilaalinta, ilaalinta, shaqada booliska, shaqada militariga, firfircoonida, u hogaansanaanta tartanka, Faransiiska Faraca Ciyaaraha iyo Schutzhund.
dane weyn st. isku dhafka bernard
NABC = Naadiga Beauceron ee Waqooyiga Ameerika
IntCH Arc's Un Reve Realize CGCA RA (Camo) the harlequin Beauceron at 8 bilood jir— 'Camo wuxuu hada ku tartamayaa AKC Adeecida, Isu soo baxa iyo Xaqiijinta. Waxay sidoo kale u tababaraysaa Agility. Oo iyana waa Eey Adeeg Caafimaad Digniin / Mobility Service. Camo waxay leedahay waqti badan oo ay la ciyaarto iyada Wanaagsan - walaalo oo waxay ku hamiyeysaa habab cusub oo ay kula tartanto milkiilaheeda.
IntCH Arc's Un Reve Realize CGCA RA (Camo) harlequin Beauceron oo 8 bilood jir ah oo u shaqeynayey Eey Adeeg Caafimaad Digniin / Dhaqdhaqaaq.
Abbee the Beauceron markuu jiray 6 bilood— 'Waxaan ka helnay Abbee the Beauceron markii ay 6 bilood jir ahayd gurmad. Waxaa naloo sheegay inay dagaal badan tahay oo aan la aqbali karin. Waxay ahayd wadarta ka soo horjeedka toddobaad gudihiis markii aan ku joognay gurigeenna. Waxay ku qaadataa dhammaan astaamaha ku qoran boggaaga macluumaadka illaa warqadda! Xaqiiqdii waa nooc si khaldan loo fahmay, maadaama eeyo badan oo ilaaliya ay yihiin. Waqti iyo dadaal badan ayaan galinay waxbarida nafteena waxaana nalagu abaalmariyay marar badan markii aan sidaa yeelnay adoo leh eey aad u weyn! '
'Abbee the Beauceron oo 8 bilood jir ah oo xoolaha shaqeeya. Iyadu waa dabeecad run ah.
Abbee the Beauceron oo 8 bilood jir ah oo shaqeynaya lo'da.
Dameerta haweeneyda Beauceron ee jirta 4 sano oo culeyskeedu yahay 80 rodol
5 wiig jir feeryahan ah
Beauceron puppy at 10 toddobaad jir— 'Kani waa Glowing Ember de Nanrox aka Ember sawirka 10 asbuuc jir. Iyadu waa eey aad u firfircoon oo ku raaxeysata ku ciyaarista dhammaan noocyada alaabta carruurtu ku ciyaarto isla markaana ay si fiican ula jaanqaado xoolaha kale guriga dhexdiisa oo ay ku jiraan kuwa kale eeyaha , bisadaha iyo chinchillas . Iyadu waa qof aad u caqli badan oo si dhakhso leh wax u barta iyada oo la xoojinaayo waxtar leh waxayna raacdaa bini'aadamkeeda meel kasta oo ay tagaan. Markii ay weynaato waxay badiyaa ka qayb qaadan doontaa kacdoonka. '
Taz the Beauceron markuu yahay 3 1/2 sano jir qabashada Frisbee— 'Taz wuxuu kubilaabmay guri wanaagsan ka dibna qoyskiisa dhib ayey la kulmeen, marka dhaqmajiraha ayaa dib ugu soo ceshatay badbaadin taas oo ah sida aan ugu helnay qoyskeena. Wuxuu ku fiicnaaday firfircoonida, dhaqashada, Frisbee iyo raadinta. Taz waxay ku fiican tahay dhammaan xaaladaha cimilada maadaama aan guri ku leenahay Colorado iyo Arizona. Sida Beaucerons oo dhan, xoogaa wuu ka fogaadaa shisheeyaha, laakiin markuu raaxeysto, wuxuu noqdaa mashiin leefleef leh.
Haunter the Beauceron oo 2 sano jir ah (UKC CH. Wandering Spirit Vom Wildweg CGC) - 'Waxaa jira hal nooc oo eey ah oo sameyn kara dhamaantiis .... Dhirta, Ilaalinta, Waxqabadka, adeecida, qoritaanka, Schutzhund. Raadinta, Eyga Adeegga, Booliska K9, Flyball…. Soo bandhigida Beauceron.
Eeg tusaalooyin badan oo Beauceron ah
Sawirada Beauceron 1
shih tzu yorkie iskudhafka sawirada
bichon frize iyo cavalier boqorka charles
madow iyo tan adhijir Jarmal ah
ceel dibi ter terrier mix